एमाले सुनसरीमा सहमतिकाे ढाेका लगभग बन्द, अध्यक्षमा पाेखरेल, चाैधरी र भण्डारीमध्ये कसले मार्ला बाजी ?
सुनसरी, २६ पुस-जिल्ला अधिवेशनकाे चार दिनसम्म नेकपा (एमाले) सुनसरीले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सकेकाे छैन ।केन्द्रले सहमतिबाटै नयाँ नेतृत्व छान्न निर्देशन दिए पनि तीन जना आकांक्षी टसमस नहुँदा सर्वसहमतिको बाटो लगभग बन्द भएको छ । सहमतिकाे प्रयास सफल हुन नसकेपछि जिल्ला अध्यक्षका लागि खेमराज पोखरेल, द्वारिकलाल चौधरी र रेवतीरमण भण्डारीले आइतबार निर्वाचन समितिमा मनोनयनसमेत दर्ता गरेका छन् ।
सुनसरीसहित देशका ६१ जिल्लामा २४ पुसमा अधिवेशन सुरु भए पनि धेेरै जिल्लामा सहमतिकै आधारमा नयाँ कमिटी चयन भसक्दा यहाँ बल्ल चुनावकाे तयारी हुँदैछ ।
यद्यपि, सर्वसहमतिका लागि आज साेमबार एक दिनको समय दिइएको छ । सहमति नभए मंगलबार पदाधिकारीसहितको चुनाव हुनेछ । अध्यक्षसहित १ सय ३५ पदका लागि ३ सय ६० जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
कसलाई कसकाे साथ ?
भीम आचार्यसहित १० बुँदे कार्यान्वयनको आवाज उठाउने नेताहरूको समर्थन पोखरेललाई छ । भण्डारीलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षको साथ छ भने चाैधरीले पार्टी भित्रको लाइनभन्दा फरक ढंगबाट उम्मेदवारी दिएका छन् ।
उक्त विवादलाई जिल्ला कमिटीले टुङ्ग्याएको थियो । सोही क्रममा प्रतिनिधि छनाेटमा भीम आचार्य पक्षका नेता बढी छन् । जसको असर भण्डारीलाई पर्ने देखिएको छ ।
यसअघि जिल्ला उपाध्यक्ष भइसकेका पोखरेल १० बुँदे कार्यान्वयनको वकालत गर्ने नेता हुन् । याे समूहले भण्डारीलाई अध्यक्ष मान्न तयार नभएपछि पोखरेल अध्यक्ष बनेका हुन् ।
जिल्लामा कमजोर बन्दै गएका आचार्य पोखरेललाई अध्यक्ष बनाउन सके आफ्नो राजनीतिक यात्रा फराकिलो हुने आँकलन गर्छन् । पोखरेललाई धेरै प्रतिनिधि भएको धरानको साथ छ । पोखरेल र आचार्यको गृह नगर इनरुवा हाे ।